Dembiilihii Muslimiinta ku xasuuqay New Zealand oo xabsi daa’im lagu xakumay - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeMaqaaloDembiilihii Muslimiinta ku xasuuqay New Zealand oo xabsi daa’im lagu xakumay
Maxkamad ku taal dalka New Zealand ayaa xabsi daa’im ku xakuntay maanta nin cadaan xagjira ah oo 51 muslimiin ah ku dilay dalkaasi kadib markii uu weeraray masjid magaalada Christchurch, waana xukunkii ugu horeeyey ee nocoaas ah oo dalkaasi ka dhaca.
Brenton Tarrant oo 29 jir ah una dhashay Australiya ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay inuu dilay 51 qof oo Muslimiin ah bishii March 2019 waliba iyadoo si live ah looga daawanayey facebook giisa markii uu dadkaasi xasuuqayey.
Xaakimka xukunka riday ayaa sheegay inuu ninkaani qorshaynayey weeraro kale oo lagu argagax geliyo dadka muxaajiriinta ah eek u sugan dalka News Land. Waxaa maxkamadda ku sugnaa dad ka badbaaday weerarkii uu ku qaaday ninkaasi masjidka iyo waliba qaar ka mida eheladii dadkii lagu xasuuqay weerarkaasi.
“ugu dambayntii waxaan qaadan karaa neeftii xoriyadda waxaanan dareemi karaa in ay caruurtaydu amaan haystaan,” ayuu yiri Atacocugu oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii uu ninkaasi ku qaaday masjidka.
Gamal Fouda, oo asna ahaa imaamkii masjidka Al Noor Mosque, ayaa isna yiri ninkaan ciqaabtiisu dadkeenii la xasuuqay nooma ay soo celinayso balse waxaan ku faraxsanahay tallaabada laga qaaday ninkaasi xag jirka ah.
Ra’iisal wasaaraha News Land, Jacinda Ardern, ayaa iyana sheegtay in aad u soo dhowaynayso kuna faraxsan tahay in indhaha ninkaasi dembiilaha ahi aanay waligood arki doonin iftiinka qoraxda.
Khayre oo ilaaladiisii la jirdilay kahor intii aanu Nairobi u dhoofin
Jubbaland iyo Puntland oo shaaciyey in shir la iskugu imaan doono Muqdisho